Macluumaadka Guddiyada Degmooyinka oo dhan | Gudiga Iskuulka | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Ma xiiseyneysaa inaad ka shaqeyso mid ka mid ah guddiyada furan ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka? Guji mid ka mid ah foomamka hoose si aad u dalbato.
Guddiga Kalandarka wuxuu ka kooban yahay maamuleyaal, shaqaale, macallimiin, waalidiin iyo arday. Ujeeddadeedu waa in laga wada hadlo jadwallada tacliinta ee mustaqbalka ee Dugsiyada Minnetonka aragtiyo kala duwan oo kala duwan ka dibna la soo jeediyo taariikhaha sannad dugsiyeedka bilowga iyo dhammaadka, daahitaanka bilowga iyo taariikhaha sii-deynta hore, taariikhaha nasashada jiilaalka iyo in wax laga qabto lana taliyo arrimaha kale ee jadwalka la xiriira.
Ka dalbo Guddiga Kalandarka
Golaha latalinta waxbarashada bulshada
Golaha La-talinta Waxbarashada Beesha Minnetonka wuxuu la taliyaa oo taageeraa Agaasimaha Fulinta ee Waxbarashada Bulshada iyadoo la siinayo talooyin ku saabsan barnaamijyada hadda jira iyo kuwa suurtagalka ah iyo baahiyaha iyo danaha bulshada. Golaha latalinta wuxuu u adeegaa sidii gole looga doodo fursadaha bulshada iyo caqabadaha jira. Xubnaha waxay si firfircoon uga qaybgalaan afar illaa shan kulan sanadkiiba. Intaas waxaa sii dheer, xubnuhu waxay u doodaan deriska, asxaabta iyo xubnaha bulshada ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka iyo barnaamijka Waxbarshada Beesha ee Minnetonka.
Guddiga La-talinta OPEB
Guddiga La-talinta ee OPEB waxay dib-u-eegis ku sameeyaan maal-gashiga Sanduuqa Kale ee Faa'iidooyinka Shaqada Kadib waxayna siisaa talooyinkeeda iyo talooyinkeeda hoggaanka degmada. Marka lagu daro shaqaalaha loo xilsaaray, waxaa jira seddex xubnood oo xubin ka ah bulshada oo ka tirsan guddigaan.
Codso Guddiga La-talinta OPEB (Hadda Buuxi)
Guddiga La-talinta Maaliyadda
Dib-u-eegista bayaannada maaliyadeed ee degmada waxayna talo siisaa Guddiga iyo Waaxda Maaliyadda ee khuseeya arrimaha dhaqaalaha iyo isbeddelada wershadaha soo baxaya
Codso Guddiga La-talinta Dhaqaalaha (Hadda Buuxi)
Guddiga La-talinta Caafimaadka Maskaxda waxay la shaqeyn doonaan daneeyayaasha muhiimka ah ee bulshada iyadoo lala kaashanayo ardayda iyo waalidiinta. Kaalinta goluhu wuxuu noqon doonaa la talin, taageerid iyo su'aalo xasaasi ah oo la xiriira degmada iyo bulshada; u dhaqmo sida isku xirka degmada iyo bulshada; gacan ka geysato sidii loo sii qiimeyn lahaa baahiyaha iyo falanqaynta xogta; samee talooyin ku habboon; ku wargeliyaan Degmada adeegyada caafimaadka maskaxda carruurta; oo ay noqdaan hogaamiyeyaal isla markaana wadaaga aqoon iyo khibrad.
Ka codso Guddiga La-talinta Caafimaadka Maskaxda
Guddiga La-talinta Barashada iyo Barashada
Waxay ugu adeegtaa qaab la-talin Guddiga Dugsiga iyo maamulka ah. Waxay ku talinaysaa natiijooyinka bartayaasha degmada oo dhan, qiimeynta, qiimeynta barnaamijka, heerarka qalinjabinta, iyo mas'uuliyadaha kale sida ay ku qeexeen Guddiga Dugsiga, Sharci dejinta Gobolka ama Waaxda Waxbarashada ee Minnesota.
Ka dalbo Guddiga La-talinta ee Barista iyo Barashada
Guddiga Dugsiga /